Fikradaha qaarkood iyo qaababka lagu xusho qurxinta Kirismaska ​​| Ragga Stylish
Imaanayaa mid ka mid ah xilliyada ugu xiisaha badan sanadka oo ay la socoto qurxinta Kirismaska ​​oo qof walba ka dhigaysa mid shucuur nagu qaadsiisa. Nalalka, dib-u-dhaca, dhalaalka iyo midabyo badan oo buuxiyo guryaha iyo meelaha caamka ah ee magaalooyin badan.
Marar badan ayaan isweydiineynaa Geed ama muuqaal dhalasho? Keebaa ugu matala?
Markaad dooranayso, labadan walxood ee qurxinta kirismaska maahan inay noqdaan kuwa gaar ah. Waa lagu kabi karaa si kor loogu qaado jawiga diirran ee Kirismaska.
1 Hababka qurxinta kirismaska
Hababka qurxinta kirismaska
Geedka Kirismaska ​​wuxuu yeelan karaa qaabab badan oo aad qiyaasi karto; geedku wuxuu noqon karaa mid dabiici ah ama macmal ah. Waxay u dhexeeyaan qurxinta dabiiciga iyo qurxinta ilaa qurxinta lagu sameeyo kareemada.
Sidoo kale waxaa jira ikhtiyaarka geedo mowduuc leh, sida jilayaal kartoon ah, oo si gaar ah loogu qurxiyey kan ugu yar guriga.
Wax la mid ah ayaa ku dhaca goobta dhalashada. Waxaa jira boqolaal qaababka dabeecadaha iyo qaababka sawirka. Waxaad ka timid noocyada yaryar ee jilayaasha waaweyn sida Ciise, Maryan iyo Yuusuf, kuwaa oo ay ku jiraan magaalo dhan. Noocyadan waxaad ku arkeysaa ragga xigmadda leh, baqalka, dibiga, adhijirrada iyo xitaa malaa'igta ciqaabta.
Waxay kuxirantahay meesha guriga la dhigaayo. Xaaladda geedka, dhererka saqafku waa muhiim. Meelaha waaweyn xitaa waa suurtagal in la dhigo tareen koronto ku wareegsan geedka. Qurxintaas Kirismaska ​​waxay u egtahay filim, laakiin waa suurtagal.
Meelaha ugu yar waxaad sidoo kale ku qurxin kartaa geedo geedo qurux badan. Waxaa lagugula talinayaa inaad iswaafajiso qaabka geedka iyo kan qurxinta guriga.
Xaaladda dhalashada dhalashada, meel ballaadhan ayaa kuu oggolaaneysa inaad dib u abuurto tuulooyinka oo dhan. Waxaa jira kuwa dhaqaajiya ilaha biyaha, nacayb iyo iscafisyo shaqeeya, kuwa wax duba oo la baxa oo rootiga dhiga, iwm.
Noocyada yaryar ayaa sidoo kale sameyn kara gees gaar ah guriga si loo xasuusto dhalashadii Ciise.
Ilaha sawirka: Casa & Diseño.com / Puerto Marina Shopping
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Qurxinta Kirismaska, geed ama dhalashada goobta?